Ngaba Ukupheliswa Kokuvukelwa Kukubonelela Ngesi Sombululo?
Yintoni i-XR? Kutheni uvukela? Yiba yinxalenye Iindaba Fumana iqela lakho Nikela
Friday, March 12, 2021 by Rob Renouf
Ngamanye amaxesha kubuzwa ukuba kutheni i-Extinction Rebellion (XR) ingazibeki izisombululo kwimozulu nakwimeko engxamisekileyo yendalo. Abanye abagxeki bathi ukuqaqambisa iingxaki kulula, kodwa loo XR ayenzi ndawo inzima: ukubonelela ngeempendulo. Kuyinyani ukuba ukuzama ukujongana nemozulu kunye nemo engxamisekileyo yendalo yinto enzima kakhulu kwaye inzima, kodwa ayisiyiyo intaba engenakwenzeka ukunyuka.
Inyani yile yokuba izisombululo sele zikhona - into engekhoyo ngoku ngumnqweno wezopolitiko wokumilisela ngokukhawuleza ngokwaneleyo-ukutshintsha yile nto i-XR ijonge ukuyenza. I-XR izama ukunyanzela isenzo, endaweni yokuqaqambisa ukusilela kukarhulumente namaziko.
© XR Jamaica
Sele sizazi ukuba zithini izisombululo
Isizathu esinye sokuba singacebisi zisombululo kukuba sele besaziwa. Akukho sibonelelo sincinci kuthi xa sizama ukubuyisela ivili xa izisombululo ezinokuhanjiswa zikhona kwaye zibhalwe kakuhle.
Siyazi ukuba utshintsho lwemozulu luqhutywa kukukhutshwa kweegesi zegreenhouse ezifana nekharbon diokside, kwaye ziyanda ngenxa yomsebenzi wabantu. Ukuthintela ukuqhubekeka kobushushu behlabathi kufuneka sinciphise ezi zinto zikhutshwa zihlabathi. Imibutho efana neZiko lobuChwepheshe obuNye obuDala eWales zichaze ngokweenkcukacha indlela esinokukwenza ngayo oku Ukunciphisa ukukhutshwa. Oku kuyakudinga iintshukumo zenkqubo efana nokuphelisa ukusetyenziswa kwezibaso kunye notshintsho lomntu ngamnye njengokunciphisa ukutyiwa kwenyama nobisi.
Elinye icandelo eliphambili lemozulu kunye nemeko engxamisekileyo yendalo ukulahleka kwendalo. Sithetha nje siphakathi kwiplanethi yethu ukuphela kwesithandathu ngokuba lo ngumsebenzi wabantu. Siyazi ukuba ukulahleka kwendalo kubangelwa zizinto ezifana nelahleko yeendawo zokuhlala, ukusetyenziswa kweekhemikhali kunye nokutshintsha kwemozulu. Ukwazi ukuba yintoni ebangela oko kuthetha ukuba siyazi ngokuchanekileyo into ekufuneka itshintshiwe ukuze siyithintele.
Ingxaki kukungazi ngezisombululo, kukungafuni okuyingozi ukuzizalisekisa. Le yingxaki i-XR ejongene nayo.
© Shiraaz Mohamed
Xa abantu bekhalaza ngokungabikho kwezisombululo, oku kuhlala kuguqulela nokuba:
"Andazi ngokwaneleyo ngalo mbandela"
"Andizithandi izisombululo ezikhoyo"
Ukukhangela ngokukhawuleza kuGoogle "zeziphi izisombululo kutshintsho lwemozulu?" inikeza iimpendulo ezininzi. Ngokucacileyo oku kuza nesilumkiso esemgangathweni sezempilo sokuba ayizizo zonke izinto ezikwi-intanethi eziyinyani. Nangona kunjalo, ukunamathela kwimithombo eyaziwayo kukhokelela kwizisombululo ezifanayo eziza ngokungenamkhethe. Ezi ngcebiso zikwafumaneka kwiincwadi ezininzi, amanqaku afana nale, iinkqubo zeTV kunye neefilimu ngalo mbandela. Kukwanokwenzeka ukuba ufumane ezinye zazo kwizicwangciso zokusebenza kwendalo esingqongileyo zoorhulumente kunye namashishini (nangona kunjalo, zihlala zikwimo encinci okanye ehlanjululwe kunemeko efunwayo). Ukulumkisa okukhulu kuyacetyiswa xa ujonga kwezi; Kwezinye iimeko ukufakwa kwabo kubangelwa ngumnqweno wokwenene wokukhusela iplanethi, kodwa kwezinye bavele kukuhlamba okuluhlaza Ke, inyani yile, siyazi ukuba yintoni ekufuneka yenziwe- ukungabikho kwezisombululo ayisiyiyo ingxaki, kukungafuni ukuzibeka kwinqanaba kunye nesantya esifunekayo.
Imfuno yokuqala ye-XR kukuba oorhulumente Thetha Inyaniso malunga nemozulu kunye nemo engxamisekileyo yendalo. Ukwenza oku kuyanceda ukujongana nengxaki yabantu yokungazi ngokwaneleyo malunga nesihloko. Sifuna abantu abaninzi kangangoko ukuba siyiqonde imeko yethu yangoku kunye nezenzo ezifunekayo ukuyithintela ukuba ibe mandundu. Ibango lethu lesibini lelokuba oorhulumente Mthetho ngoku kwaye bathathe inyathelo kwangoko kwinqanaba elikhulu elifunekayo ukulungisa imozulu kunye noxakeko lwezinto eziphilayo.
Ngenxa yokuba izisombululo zibhalwe kakuhle kwaye uninzi sele luzalisekisiwe ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, ukunqongophala kolwazi ngokufuthi ayisiyo ngxaki. Ingxaki kukuba ezi zisombululo ayizizo uninzi lwabantu, abezopolitiko okanye amashishini afuna ukuva okanye ukumilisela.
Umzekelo, kukho ukuqonda ngokubanzi ukuba ukuhamba ngenqwelomoya kuvelisa izinto ezikhutshayo eziyingozi kwaye ukunciphisa oko kuya kulunga kwindalo esingqongileyo. Uphando lubonakalisile ukuba [uninzi lwezinto ezikhutshwayo ziveliswa liqaqobana](https://www.theguardian.com/business/2020/nov/17/people-cause-global-aviation-emissions-study-covid -19). Kukho impikiswano encinci yokuba isisombululo sifuna ukuncitshiswa kohambo lomoya kwaye umqobo ophambili kukungafuni ukwenza oku. Oku kubonakala kungekuphela nje ngokungafuni kwabanye abantu ukulungisa indlela abaziphethe ngayo, kodwa nokwala koorhulumente ukukhuthaza okanye ukunyanzela utshintsho ngeendlela ezifana neerhafu zeeflaya rhoqo okanye omnye umthetho.
‘Gcina uMhlaba okanye uKhenketho’ © XR Sverige
Kuyimpazamo ukucinga ukuba abantu kwimibutho efana ne-XR bayazithanda ezi zisombululo kunaye nabani na. Inokuba kunjalo, kodwa ngamanye amaxesha umahluko kuphela kukwamkelwa kwesidingo sabo. Oku kunokuba sisiphumo sokwazisa ngakumbi iziphumo ezibi zokungasebenzi.
Olu dliwanondlebe nomqhubi wenqwelo moya lubonisa indlela umntu angathanda ngayo ukuhamba nokuthembela kumzi-mveliso wenqwelo moya ngengeniso yakhe, kodwa abe esasiqonda isidingo sotshintsho. Ukwamkela ukuba into ifuna ukwenzeka kwaye uyithande ayifani.
Ukuhamba ngenqwelomoya kukwabonelela ngomzekelo ogqibeleleyo wobungozi bokutsalwa kwizisombululo ezikhohlisayo ezingekhoyo ngoku. Kukho ithemba elincinci kakhulu leendleko zeenqwelo-moya eziphantsi zokufumana iindleko ezifumanekayo nanini na, kodwa abantu abaninzi banqwenela ukugxila kule ndlela njengendlela eya phambili. Inokwenzeka kwixesha elizayo, kodwa ixesha-elingahambelaniyo nesantya apho kufuneka sinciphise ukukhutshwa kwezinto ukuthintela ukutshintsha kwemozulu eyintlekele.
Ukutshintsha indlela esicinga ngayo malunga nemozulu kunye nemeko engxamisekileyo yendalo
Iglasi ikwisiqingatha ugcwala
Cinga ngemozulu kunye nengxakeko yendalo njengokugula: oosonzululwazi bemozulu basixelela ukuba iplanethi yethu ayiphilanga. Nangona kunjalo, iindaba ezimnandi zezokuba uninzi alucingi ukuba lusiphelo (ubuncinci okwangoku) kwaye kusekho izinto ezininzi esinokuzenza ngayo. Njengesigulana, nje ukuba sidlule kumothuko wokuqala wokufunda ukuba siyagula, singavuya kakhulu ukuva ukuba unyango lwalukhona olunokusisindisa. Kukwanokwenzeka ukuba singafuna ukuqalisa ngonyango lwethu ngokukhawuleza.
Yiyo kanye le nto sikule meko kunye nemo engxamisekileyo yendalo, kodwa asiyiphenduli ngendlela efanayo. Endaweni yokuziva uqinisekile ukuba unyango lukhona, kuhlala kukho ukugxila kunyango olusezantsi. Njengonyango lwesifo esibi, izisombululo kwingxaki yemozulu zinokuba nefuthe elibi kubomi bethu. Banokuthetha ukuba abantu kumazwe afumileyo abasakwazi ukuphila ubomi obufanayo nobangaphambili; okanye oorhulumente abanakuphinda bathembele kwakwimithombo yamafutha enexabiso eliphantsi, engcolileyo. Nangona kunjalo, ezi ziphumo zingathandekiyo kulula kakhulu ukuzamkela xa sele siqondile inyani elula yokuba iyimfuneko ukuze sizisindise kunye nabanye.
Siyazi ukuba abantu abaninzi sele behlupheka ngenxa yeziphumo zamanqanaba obushushu obusenzeka emhlabeni namhlanje. Nangona kunjalo, uninzi lusafuna ukulibazisa isenzo, nangona iziphumo eziqikelelweyo zokwenza njalo zibi kakhulu. Xa umntu efunyaniswe enomhlaza, iinjongo ziqhele ukuwunyanga ngokukhawuleza. Kwiimeko ezininzi abantu ababuzi ukuba banokulibazisa ixesha elingakanani unyango okanye ukuba banokuvumela kude kangakanani ukugula ukuba kuqhubeke.
Kufuneka sicinge ngotshintsho lwemozulu ngendlela efanayo esicinga ngayo ngomhlaza- akukho nqanaba likhuselekileyo, yiyo loo nto kufuneka sithathe amanyathelo kwangoko ngaphambi kokuba mandundu ngakumbi. Enye into ethandabuzekayo kukuba asinakutsho ngokuqinisekileyo ukuba unyango alusayi kuphinda lube khona. Kukho ngokumangalisayo ubudlelwane obuntsonkothileyo phakathi kobudlelwane kwindalo yendalo kunye nokubanakho kweengxelo zemozulu ezinokumiliselwa. Oku kuntsokotha kuthetha ukuba akunakwenzeka ukuba uqikelele nangayo nayiphi na intembelo xa kusenokwenzeka ukuba amanqaku anokuvela asishiya singenamandla okuthintela ukutshintsha kwemozulu. Into esiyaziyo kukuba ukulibaziseka kuyawanciphisa amathuba eziphumo ezilungileyo kwaye oko kuya kuthetha ukuba isenzo esigqithisileyo siyafuneka.
Ngokugula okusongela ubomi, bambalwa kakhulu kuthi abanokuthi balugatye unyango esele lukhona kwaye badlale ngokunyanga okungcono okuphuhliswayo kungekudala. Ukanti le yile nto sizibeka emngciphekweni wokutyala ukuzithemba kakhulu kubuchwephesha obutsha obufana ne- ukususwa kwekhabhoni. Ukususwa kwekhabhoni kungqiniswanga nakweyiphi na into efana nesikali esifunekayo ukuze sibe nefuthe lokwenyani kutshintsho lwemozulu. Isenokuba sisisombululo kwixesha elizayo, kodwa kukungakhathali ngokupheleleyo ebhankini koku. Ukuba sicinga ngemozulu kunye nengxakeko yendalo efana nesifo esisongela ubomi, emva koko sihambe nezona zisombululo zilungileyo zikhoyo ngoku [zimele eyona ndlela ikrelekrele phambili](https://www.nature.com/articles/s41560-019-0365- 7? Iqonga = hootsuite kunye neqonga = hootsuite kunye ne-dom = prime & src = syn).
Senza izisombululo zokujongana nokungasebenzi kwimozulu nakwimeko engxamisekileyo yendalo- hayi izisombululo zobugcisa kutshintsho lwemozulu kunye nelahleko yendalo, njengoko sele sinazo.
Esinye isizathu sokuba i-XR ingathetheleli izisombululo ezithile kukuba ibango lethu lesithathu kukwenziwa kweendibano zabemi . Indibano yabemi ibandakanya icandelo elimele abantu abaqhelekileyo abafunda malunga nesifundo kwaye emva koko beze neengcebiso kwindlela eya phambili. Ukuvumela abantu abaqhelekileyo ukuba babone ikamva lethu ngokudibeneyo kunika eyona ndlela ibhetele yokuya phambili kunokuthembela koosopolitiki aboyikayo ukuphulukana neevoti okanye neqaqobana leebhiliyoni ukwenza zonke izigqibo ezinzima. Siyakholelwa ekubeni abantu bakuba benikwe ulwazi olwaneleyo kwaye baqonde ukhetho, baya kuba nakho ukumisela eyona ndlela yokusebenza. Akufanelekanga ukuba sibaxelele ukuba impendulo yabo kufuneka ibe yintoni ngaphambi kokuba baqale.
I-XR ijolise ekwandiseni ukuqonda kunye nokuqonda ingxaki, ngelixa ikwajongana ngqo nokungaziphathi kakuhle kokuthatha amanyathelo ngokukhawuleza. Sifuna oorhulumente kunye namajelo eendaba ukuba bavule ngokupheleleyo kwaye bathembeke malunga nobungakanani bengxaki esijamelene nayo, ukuze wonke umntu abuqonde ubuzaza bayo nezizathu (Xelela iNyaniso). Oku kunjalo ukuze sonke sityhalele oorhulumente ukuba bathathe inyathelo ngesantya imeko efunekayo (Mthetho ngoku). Izisombululo zonke zikhona kwaye sifuna abantu abaqhelekileyo (hayi nje amalungu e-XR) ukuba benze izigqibo ezizizo malunga nokuzalisekiswa ngeendibano zabemi.
Ngaba ayivakali ingenangqondo kakhulu okanye igqithile, akunjalo?
Ukutshabalala Kwemvukelo Ukupheliswa kwemvukelo yintshukumo esasazekileyo, yamazwe ngamazwe kunye nezopolitiko ezingathathi cala zisebenzisa inyathelo elingenabundlobongela ngokuthe ngqo nokungathobeli eluntwini ukweyisela oorhulumente ukuba benze ngokuchanekileyo kwiMo yezulu neNgxakeko yeNdalo. Yiba yinxalenye …or consider making a donation.
Yiba yinxalenye Fumana iqela lakho Nikela
Yintoni i-XR? Kutheni uvukela? FAQ
Ibhlog Yondla Cinezela
Inkxaso Yomhlaba Wonke
Qhagamshelana nathi Nxibelelana neqela lewebhu Umthetho wabucala Annual Report Open In New icon 2021 Midyear Report Open In New icon
Yenziwe ngothando nangomsindo yi-XR Global Support Ukupheliswa kwemvukelo (i-XR) yintshukumo yokwenza kunye kunye. Yonke uyilo kunye nomsebenzi wobugcisa ungasetyenziselwa ukuthengisa ngenjongo yokugcina umhlaba. Oku akuthethi ukuba wenze ukuthengiswa kwentengiso okanye uthumele i-XR ipesenti yentengiso yakho. Asikhuthazi okanye senze nayiphi na intengiso kwaye siya kulandela kwaye sitshutshise nabani na owenzayo. Uphawu lokuCinywa lwayilwa ngo-2011 ligcisa lasesitalatweni i-ESP, eboleka ukusetyenziswa kweXR ngendlela efanayo: www.extinctionsymbol.info